एकाएक रणभुमि बन्यो सर्लाही, १ जनाको मृत्यु ११ जना गम्भीर घाइते ! अवस्था तनावग्रस्त – ईमेची डटकम
एकाएक रणभुमि बन्यो सर्लाही, १ जनाको मृत्यु ११ जना गम्भीर घाइते ! अवस्था तनावग्रस्त
काठमाडौं । अचानक सर्लाही जिल्ला तनावग्रस्त बनेको छ । सर्लाहीको ईश्वरपुरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच फाइरीङ सुरु भएपछि तनावग्रस्त भएको हो । दोहोरो पक्षको झडपका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एक जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ । घटनामा ८ प्रहरी र ३ जना प्रदर्शनकारीसहित ११ जना घाइते भएको जानकारी दिइएको छ । ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका बाँके नदीमा अवैध ढुंगागिट्टी उत्खनन् गर्दा बनेको खाल्टोमा शनिवार डुबेर एक बालकको ज्यान गएपछि स्थानीयले त्यसको विरोधमा आज प्रदर्शन गरेका थिए । शनिबार ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर १३ बस्ने लाले रायका १२ वर्षीय छोरा अमितकुमार यादवको खाल्डोमा डुबेर ज्यान गएको थियो । खाल्डोमा डुबेर बालकको मृत्यु भएपछि त्यसको विरोधमा क्षतिपुर्ति माग गर्दै स्थानीयले राजमार्ग अबरुद्ध गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा तनाब भएको हो । घटनाबारे प्रहरीले थप आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । मृतकको सनाखत भइसकेको छैन ।
खाना पकाएर नखुवाएको र घरधन्दा पनि नगरेको भन्दै पुरुषले श्रीमती विरुद्ध अदालतमा मुद्दा
प्राय दिनहु विश्वमा अनैठों अनैठो घटनाहरू भइरहेको हुन्छ । त्यस्तै युरोपेली मुलुक इटलीमा पनि अनैठो घटना भएको छ । फाइल फोटोआफूलाई खाना पकाएर नखुवाएको र घरधन्दा पनि राम्रोसँग नगरेको भन्दै एक जना पुरुषले आफ्नी श्रीमती विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । यदि उनको अभियोग प्रमाणित भयो भने विचरी ती श्रीमतीलाई ६ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने भएको छ ।मध्य दक्षिण इटालीको लाजियोमा बस्ने एक महिलामाथि आफ्नै लोग्नेले घरपरिवारलाई बेवास्ता गरेको आरोपमा मुद्दा हालेका हुन् ।उनले आफ्नी श्रीमती विरुद्ध दिएको उजुरीमा श्रीमतीले घर सफा नगरेर परिवारलाई अपहेलना
गरेको तथा परिवारप्रति श्रीमतीको दुव्र्यवहार पछिल्लो दुई वर्षसम्म जारी रहेको उल्लेख छ ।साथै ती ४७ वर्षका पुरुषले आफ्नी श्रीमतीकै त्यस्तो व्यवहारका कारण आफू निकै फोहोर अवस्थामा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । आफूले पकाउनका लागि विभिन्न खानेकुरा किनेर ल्याउने गरे पनि श्रीमतीले नपकाउने र कुहाएर टोकरीमा फ्याँक्ने गरेको उनको आरोप छ ।उनको अर्को आरोप झनै गम्भीर छ । आफू श्रीमतीसँग एउटै ओछ्यानमा सुत्न नपाएको र सँगै सुत्न खोज्दा लात्ताले हिर्काएर घचेटेको उनको गुनासो छ । यदि वादीको दाबी पुगेमा ती महिलालाई ६ वर्षसम्मको जेल सजायँ हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
रोल्पा जिल्ला रोल्पा नगरपालिका–२ थलिवाङका शिव डाँगीे जिल्लाकै पहिलो पाइलट बनेका छन् । बाबू प्रेम बहादुर डाँगी र आमा शोभा डाँगको छोरा शिव सानैदेखि पढाईमा निकै अब्बल थिए । सानो उमेरदेखिनै कडा परिश्रम गरेर पढेका उनको लक्ष्य नै पाइलट बन्ने थियो । रोल्पा जिल्लामा जन्मिएका शिव घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै पनि आमा र बाबूले खेती किसानी गरेर भएपनि छोराको इच्छा पुरा गरेका छन् ।
नेपाली सेनाको हवल्दार भएर रिटायर भएका बाबू प्रेम बहादुरले तरकारी खेती गरेर पढाएका छोरा यतिबेला पाइलट बनेर दिनदिनै आकाशमा जहाज उडाउँछन् । आफ्नो लक्ष्यदेखि नडग्मगाएका उनी छिमेकीले कुरा काट्ने खिल्ली उडाउने गर्दा पनि आफ्नो लक्ष्यदेखि बितलित भएनन् । कक्षा १० सम्म रोल्पाबाट आवासिय माध्यमिक तहको पढाइ पुरा गरेका उनी उच्च माविको पढाइ पुरा गर्न राजधानी आएका थिए । त्यसपछि फिलिपिन्सको मनिलामा फास्ट एडिएसन एकेडेमीमा पाइलट कोर्ष शुरु गरे ।
पाइलट बन्ने सपनामा बोकेर फिलिपिन्स पुगेका उनलाई सुरुमा नै कलेजले धोका दियो । पहिलो कलेजमा भर्ना गर्न ३२ लाख खर्च गरिसकेका शिवलाई फेरि दोस्रो कलेजमा भर्ना गर्नुपर्यो । निरन्तर ८ वर्षसम्म पाइलटको कोर्स गरेपछि आफ्नै देशमा काम गर्ने सोच बनाएर नेपाल फर्केका उनी अहिले नेपाल र भारतको आकाशमा दैनिक जासो जहाज उडाउँछन् । नेपाली सेनाबाट रिटायर भएका बाबूको मासिक तलबले घर खर्च चलाउन पुग्दैनथ्यो । विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्यार सधै प्रथम हुने भएको कारण कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्तिमा पढेकोले खर्च कम लागेको शिवकी आमा शोभाले बताइन् ।
छोराको सपना पुरा गर्न रात दिन तरकारी खेतीमा तल्लीन शोभा बिहान बेलुका तरकारी बेचेर महिनामा ४०, ५० हजार कमाउने गर्थिन् । ब्यापारबाट आएको रकम छोराको पढाइ खर्चमा ठिक हुन्थ्यो । शिवले पाइलट बन्ने कुरा गर्दा छिमेकीले खिल्लली उडाउने गरेको आमा शोभोको भनाइ छ । तरकारी बेचेको पैसा र केही जग्गा जमिन बेचेको करिब १ करोड पैसाले जेठो छोरा पाइलट भयो कान्छो छोरा तरकारी बेचेर कमाएको पैसाले काठमाडौँमा इन्जिनियर पढ्दैछ । खेती गरेर नै भएपनि आफ्नो सन्तानको सपना पुरा गर्न सकेकोमा आफुहरु खुसी रहेको शिवका आमाबाबूले बताएका छन् ।